देउबाले पत्रकारको सातो खाए – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदेउबाले पत्रकारको सातो खाए
देउबाले पत्रकारको सातो खाए
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरवहादुुर देउवाले कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार नभएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार संचारकर्मीहरुसँग कुुरागर्दै उनले काग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षको म्यान्डेड दिएकाले सरकारमा जान कांग्रेसलाई हतार नरहेको बताएका हुन् ।
सभापति देउवाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा वसेर जनताको हितमा काम गरिरहेको बताए । ‘जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेड दिएका हुन् ।’ उनले भने,‘म्यान्डेड अनुुसार अहिले हाम्रो सरकारमा जाने अवस्था छैन । सरकारमा जान केही वितेको छैन । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुुमिका निर्वाह गरिरेका छौँ ।’
पत्रकारहरुले भने सरकारमा कहिले जाने ? अविश्वासको प्रस्ताव कहिले आउँछ ? जस्ता प्रश्न गरेका थिए । देउवाले कांग्रेस विपक्षी दल भएको बताए ।ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने हो भन्ने प्रश्न सोधेपछि भने कांग्रेस सभापति देउवा रिसाए । उनले झे’क्किँदै भने, ‘विपक्षी पार्टी भनेको सुन्नु भएन ?’त्यसपछि उनी ‘विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी ! जानुस्’ भन्दै उठेका थिए ।